Ra’iisul wasaare Kheyre oo la kulmay dhiggiisa dalka Itoobiya Hailemariam Dessalegn (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre oo la kulmay dhiggiisa dalka Itoobiya Hailemariam Dessalegn (SAWIRO)
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa shalay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya kullan kula yeeshay dhiggiisa dalkaasi Hailemariam Dessalegn, iyagoona kullankooda uga hadlay dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto xasillinta, iskaashiga, dhaqaalaha iyo horumarka labada dal.
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo magaalada Addis Ababa uga qeyb-galay shir deg deg ah oo isugu yimaadeen madaxda urur goboleedka IGAD ayaa sheegay in dhiggiisa dalka Itoobiya Hailemariam Dessalegn uu kala hadlay sidii ay Itoobiya u kordhin laheyd taageeradda ay siiso dalka Soomaaliya, islamarkaana la isaga kaashan lahaa waxkasto oo dan u ah labada dal.
“Waxaan leennahay dalka Itoobiya iskaashi iyo xiriir qoto dheer, waxaana uga mahad celinaynaa sida wanaagsan oo ay dowladda Itoobiya mar walba noogu garab taagan yahay dadaalka aan ugu jirno xasillinta iyo nabadeeynta dalka Soomaliya” Sidaas waxa yiri ra’iisul wasaare Kheyre.
Sidoo kale, ra’iisul wasaare Kheyre ayaa sheegey in dhiggiisa Itoobiya ay isla garteen sidii looga wada shaqeyn lahaa xoojinta arrimaha dhaqaalaha islamarkaana labada dal xiriirkoodu ku koobnaan doonin amniga oo kaliya, balse ay bilaabayaan xiriir cusub oo dan u ah labada dowladood.
Dhinaca kale, ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Dessalegn ayaa dhinaciisa ballan qaaday inuu dalkiisa uu diyaar u yahay sidii mar walba loo xoojin lahaa iskaashiga labo geesoodka ah ee ka dhexeeya labada dal.
Wuxuu ra’iisul wasaaraha Itoobiya Hailemariam Dessalegn ku ammaanay dowladda federaalka Soomaaliya sida wanaagsan oo ay ula macaamilaan maamul goboleedyada iyo xoojinta iskaashiga dhex mara dhinacyda Soomaalida.
Ugu dambeyntii, labada ra’iisul wasaare ayaa isla qaatay go’aan ah in la dhiso guddi heer wasiir ah oo ay hoggaaminayaan wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal, si loo dardar geliyo xiriirka cusub ee Soomaaliya iyo Itoobiya.